Fahasalamana: hopitaly telo nahazo ny Label 5S | NewsMada
Fahasalamana: hopitaly telo nahazo ny Label 5S
Voalohany nahazo ny lokan’ny Label qualité 5S ny CHU Anjanamasina, manaraka azy ny CHU Mitsinjo Betanimena ary fahatelo ny CHU Mère enfant Tsaralalàna.
Sivana, Sokajiana, Sasana, Soratana, Saintsainina no mamaritra ny 5S. Paikady fandaminana ny asa hatao eny anivon’ny hopitaly izy ireo mba handrindrana ny fomba fiasa sy ho fanatsarana ny tolotra ho an’ny marary.
Fantatra io, omaly nandritra ny fizarana loka ho an’ireo hopitaly mendrika tamin’ny fametrahana ny paikady 5S izay iarahana amin’ny Japoney amin’ny alalan’ny Jica. Fito ireo hopitaly lehibe nandray anjara nifaninana mba hahazo ity Label qualité 5S ity, saingy ireo telo ireo no nahafeno ny fepetra.
Tanjona napetraka ny fanatsarana ny kalitao eny anivon’ny hopitaly, ny fanomezana fitsaboana tsara manaja ny maha olona ary ny fandraisana ny marary sy ny fitandroana ny fidiovana ary ny filaminana. Hapetraka eny anivon’ny hopitalim-panjakana ity fomba fiasa ity hanatsarana ny tolotra omena ny marary.
Fepetra nahazoana ny Label 5S ny fampiharan’ireo sampan-draharaha rehetra ao amin’ny hopitaly ny fomba fiasa 5S.Tokony hahazo salanisa 80% ny hopitaly amin’ny fotoana hanaovana ny tomban’ezaka. Mila mampihatra ny 5S ao anatin’ny roa taona aorian’ny fahazoana ny label ary firosoana amin’ny dingana manaraka dia ny “kaizen”.